Abenzi kunye nabanikezeli belanga - i-sunscreen Fabric Factory
China Windows Sun Shade ipholiyesta Rolling zenjini ...
Ihowuliseyili Anti-UV fiberglass elangeni amalaphu Kuba R ...
Umbane oMhlophe oMacala oMabini oMbane oLuhlaza oLuhlaza oLuhlaza oMnyama oMfama
I-China Roller Blind amalaphu
Kwiintsapho, amakhethini anokusetyenziselwa ukwenza umthunzi, ukukhusela ubumfihlo, kodwa nokuhombisa amakhaya abo. Nangona kunjalo, uninzi lwamakhethini amatsha aqukethe i-formaldehyde. Emva kokuba amakhethini amatsha ethengwe ekhaya, awanakuxhonywa ngokungxama. Amanye amanyathelo kufuneka athathwe ukunciphisa intsalela ye-formaldehyde kumakhethini ngaphambi kokuba asetyenziswe ngokukhuselekileyo. Masidibanise iqela ukuba sichaze indlela yokuphelisa imethanol!
Umgangatho oLungileyo we-Zebra Window Roller Blinds kunye ne-Shades Polyester Sunscreen Fabric
I-UV kunye neRoller Waterproof Blind Fabric
Ilaphu leZebra linokucuthwa kabini, linokuhlengahlengisa ukukhanya kwekhaya kwaye alihlali ndawo. Umbala ugcwele kwaye umsulwa, umbala weempahla ezikumgangatho ophezulu ziqhamo kwaye ziyathandeka, ngombala wokukhawuleza kombala kwaye unqabile kwi-Sun, akukho lula ukuphela.
Ilaphu elikumgangatho ophezulu licabalekile, kwaye akukho kugobeka kwendebe okanye ukutshangatshangiswa kwicala elibanzi lobubanzi.
Umgangatho olungileyo wePhepha lePhepha eliPhezulu lePolyester Rainbow Curtain Double Zebra Blind Sunshade Fabric
Ngokusetyenziswa okubanzi kwamalaphu omthunzi, abantu baneemfuno ezahlukeneyo ezizezakho zomthunzi amalaphu e-PVC, phakathi kwawo amnyama amakhethini amalaphu elanga nomsebenzi wokungena manzi nawo athandwayo.
Umgangatho ophezulu oXabiso liXabiso loMlilo oLibala iZebra Blinds
Imisebenzi yeqwarhashe limfamekisa ilaphu
Xa i-gauze kunye ne-gauze ihamba, ukukhanya kuthambile, okunokunciphisa ukukhanya ngokuthe ngqo ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile. Xa ikhethini kunye nekhethini limile, ukukhanya kuvaliwe ngokupheleleyo, ukuze ekugqibeleni kufezekiswe injongo yokuthintela ukukhanya. Zininzi iindlela zeemfama ze-zebra, kwaye iindlela ezahlukeneyo ziya kuba nemisebenzi eyahlukeneyo. Kwiimeko ezininzi, ezi ndlela zohlulwe ngokwelaphu elisetyenzisiweyo.
Amalaphu omkhusane weZebra ubukhulu becala ipholiyesta, ihempe kunye nenayiloni. Ngokweziphumo ezahlukileyo zokufotwa kwamalaphu, zinokwahlulahlulwa zibe ngamakhethini eqwarhashe anemithunzi, amalaphu e-zebra anjengelinen kunye namakhethini e-zebra apheleleyo. Iziphumo zokufiphaza ukusuka ezantsi ukuya phezulu.
Umgangatho ophezulu wokuPrinta i-Butterfly Jacquard I-Sunscreen ye-Zebra Roller Blinds Fabrics
Ukuthuthuzeleka kwabantu kwimeko yangaphakathi kuhambelana nezinto ezininzi, kwaye iqondo lobushushu bemitha yendawo engqongileyo yiparameter ebalulekileyo.
Ehlotyeni, imitha yelanga ethe ngqo ingena kwigumbi ngeglasi iya kubangela ubushushu bemitha kwindawo eqinileyo yegumbi elikufutshane nefestile ukunyuka ngokubonakalayo, inike abantu imvakalelo yokubhaka.
Ebusika, ifestile yeglasi enobushushu bomhlaba obusezantsi kakhulu inika imvakalelo yemitha ebandayo. Kwangelo xesha, ukubanda komoya obandayo okubangelwa kukuzika komoya obandayo kufutshane nefestile kuzisa imvakalelo yomoya obandayo ovuthuzayo kubantu abakufutshane nefestile, okunciphisa kakhulu ukonwaba kwabantu.
Ikhaya le-DEC yokuCima uQinisekiso lweZithuthi lweZibra zoShutter Shade yeWindow Roller Blinds Ilaphu
Umbala we-sunscreen ye-zebra eyimfama yelinen kufuneka inganeli nje ukuhlangabezana neemfuno zokuhombisa, kodwa ikwaqwalasele ukubonakaliswa kwelanga.
(1) Ukuba ifakwe ngaphandle, amalaphu amnyama anesakhono esomeleleyo sokuthintela ubushushu obuqaqambileyo belanga kunamalaphu akhanyayo kuba akukho mfuneko yokuba aqwalasele umbala omnyama welaphu; ukuba isetyenziswe ngaphakathi, amalaphu akhanyayo anokubonakalisa ngcono.
Ikhaya le-DEC eliphindwe kabini ngeeMoto eziQinisekisiweyo zeWindow Window Blinds Shade Ilaphu
Xa sifika kwindawo engaqhelekanga, into yokuqala esitsalayo kukuhombisa. Ukuhonjiswa okuhle kunokusinika imvakalelo entsha. Iphepha lodonga elikhethekileyo, kunye nokukhethwa okuhle kwamakhethini, kuhlala kunokuzisa incasa eyahlukileyo ebomini. Namhlanje, siza kwazisa umgaqo osisiseko wokufanisa iphepha lodonga kunye namakhethini kuwe xa sikhetha ikhethini. Masilungiselele isimangaliso sephupha elimangalisayo ngobomi bethu.
Iimfama ezihamba ngeemoto zisebenzisa iLaphu leZebra eziLuhlaza eziMfama
iimfama zidlala indima ebalulekileyo ekuhlengahlengiseni umbala kunye nokudala imeko ekuhombiseni kwasekhaya. Kuthatha ingqalelo engakumbi nangakumbi kumhombiso. Nangona kunjalo, akukho lula ukwaneliseka ngumhombiso. Ke indlela yokutshatisa umkhusane osongelayo?
Xa kuthelekiswa namakhethini ombala oqinileyo wemveli, amakhethini okusiphela ayabelana ngesondo ngakumbi. Unokukhetha izinto ezifanelekileyo kunye nemibala ngokungqinelana nesimbo sokuhombisa ikhaya kunye nezinto ozikhethayo, kwaye wenze indawo enesidima isebenze. Ngoku siza kukubonisa indlela yokudibanisa imibala ngcono!
Uyilo olutsha uMini oMnyama kunye noBusuku beZebra Rainbow Roller Blind Fabric yokuhombisa
Ilaphu le-Semi-translucent: lilungele izikhundla zeofisi ngokubanzi, ezikwaziyo ukunxibelelana nemeko entle engqongileyo.
Ubusuku kunye nemini ephinda kabini iimfama zeLanga zeZebra Blinds Ilaphu
I-Roller Blind Day-Night-Zebra Shades
Ilaphu leqwarhashe lesikrini esine-sunscreen kwimpilo yabantu kunye nokuhlala kwendalo, ukuphucula ubungakanani bokukhanya ngaphakathi kunye nokuthuthuzela kwendalo yangaphakathi, eli laphu lomthunzi lenza ukukhanya okungena kwigumbi kube nokuthamba kwaye kamnandi, kwaye kudala incasa yendalo, yongeza ubuhle yendalo esingqongileyo, kwaye yenza abantu baphumle, amalaphu aphindwe kabini anokulungisa ukukhanya. Xa iimfama zivuliwe, siyakonwabela ubuhle bendalo bangaphandle. Xa iimfama zivaliwe, ikude ngokupheleleyo ngaphandle, qinisekisa ukuba ngasese.
Incwadana yangaphandle yeZebra Sun Screen Roller Blind Sunscreen Blinds amalaphu
I-Zebra blinds ikwabizwa ngokuba yimfama ethambileyo, iimfama zomnyama, ukufiphala okungaboniyo, ukungaboni kabini. Ilaphu elilukiweyo elenziwe ngamaqhekeza amancinci elaphu kunye ne gauze enobubanzi obulinganayo obuqelelanayo ngaphandle komnye, obulungiswe kwicala elinye, kwaye elinye icala liyasongwa ngeshafti ukulungisa ukukhanya.
Xa i-gauze kunye ne-gauze ihamba, ukukhanya kuthambile, ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, ukunciphisa ukukhanya ngokuthe ngqo. Xa ilaphu kunye nelaphu limile, ukukhanya kuvaliwe ngokupheleleyo, ukuze ekugqibeleni kufezekiswe injongo yokuthintela ukukhanya. Xa iimfama zifuna ukuvulwa ngokupheleleyo, iimfama zinokugqitywa ngokupheleleyo. I-zebra blind idibanisa ubushushu belaphu, ukuhombisa kwe-blind blind, kunye nomsebenzi omfiliba weemfama. Kulula ukusebenza kwaye ineentlobo ezahlukeneyo ze-shading ngaphandle kokuthintela icandelo lombono. Olu khetho lulungele iofisi kunye nokuhonjiswa kwefestile ekhaya.
Iipateni zangaphandle zeWindows Zebra Blind Roller Shades Jacquard Fabric
IMagicalTex Ilanga leLanga eliPhumeleleyo liphumelele iSatifikethi seGREENGUARD kunye neGREENGUARD yaBantwana neZikolo
IGREENGUARD ikakhulu yazisa ngemigangatho yomoya esemgangathweni ongaphakathi, ukubonelela ngovavanyo lomntu wesithathu kukhuseleko olusezantsi lweemveliso zeekhemikhali. Inika iimveliso ezinempilo ngakumbi kwaye iphucula imeko engaphakathi. Yimigangatho ekubhekiswa kuyo kunye nomxholo webhonasi yenkqubo ye-LEED yoLwakhiwo loGayo. IGREENGUARD Institute yezendalo, njengeziko elivunyiweyo neligunyazisiweyo lokusekwa liZiko leMigangatho yeSizwe laseMelika (i-ANSI) esekwe umgangatho ongqongqo wemveliso kuzo zonke iimveliso zangaphakathi, kubandakanya izinto zokwakha, izinto zokuhombisa, ifanitshala, izinto zomgangatho, izinto zaphezulu, iipeyinti kunye nezinto zokwaleka. , iiarhente zokucoca kunye nezinye iimveliso zabantwana kwiindidi ezingaphezu kwama-20.